Wararka asfaltiga ah
Dawlada Hoose ee Magaalada Şanlıurfa waxay siisaa wadooyin gaboobay, jidad miyi ah oo gaboobay adeegii shacabka iyadoo loo qalabeeyay wadooyin la taaban karo oo waara. Dawlada Hoose ee Magaalada Şanlıurfa waxay dhistay wadooyin la taaban karo oo waara oo waara. [More ...]
Waddooyinka Gacanka Cusboonaysiiyay
Degmada Weyn ee Kocaeli, oo ahmiyada siisa dayactirka, hagaajinta iyo cusboonaysiinta howlaha wadooyinka ee Kocaeli oo dhan, waxay sii wadaysaa howlaheeda si ay muwaadiniinta u siiso gaadiid raaxo leh. Jihadaan, shaqooyin dayactir ayaa lagu fuliyay waddooyinka qaar ee degmada Gacanka. Hoose [More ...]
Dowlada hoose ee Konya, Aslım Street waxaa loo diyaariyey adeegsiga iskudhafyada agabka guryaha ee gabi ahaanba laamiga ah ee wadooyinka la taaban karo. Wadada la taaban karo, oo la rajaynayo inay 30 boqolkiiba ka dhaqaalo badan tahay kana cimri dheer tahay wajiga wadooyinka laydhka leh [More ...]
Mersin Metropolitan Asphalt Awooda Si Loo Kordhiyo
Duqa Magaalada Mersin Vahap Selector, asphalt wadada laamiga ah waxaa laga helay goobta dhismaha. 200 tan oo ah warshad awooda awooda horay ushaqeysa goobta, 100 tan oo ah warshad awooda awooda ayaa la dayactiri doonaa dibna u soo saari doontaa [More ...]
Izbeton, Aaga Wershadaha Aasaasiga ah, oo hoyga u ah shirkadaha waaweyn ee waxsoosaarka magaalada ayaa gacantooda soo duubay si ay u cusbooneysiiyaan wadooyinka. Izbeton, oo ah shirkad hoos timaad magaalada Izmir Metropolitan Municipal (IMM), waxay sii wadaysaa howlaha dib u cusboonaysiinta wadada meelo badan oo magaalada ah. [More ...]
Wadooyinka Tuulada Korfez ee Koontarool waxay raaxo ka helaan Kocaeli; Degmada Weyn ee Kocaeli waxay muhiimadda siisaa dayactirka, hagaajinta iyo cusboonaysiinta jidadka oo dhan. [More ...]
Wadada Wadada Makavgat Ahmetler
Antalya Metropolitan District Manavgat degmada Ahmetler Neighborhood waa qalloocan tahay oo ciriiri ah sababta oo ah cabashada ay muwaadiniintu bilaabeen inay dhisaan 9 kiiloomitir wadada. Dowladda Hoose ee Magaalada waxay sii wadaysaa howlaheeda kooxda 14 ee Ahmetler Quarter ee Manavgat [More ...]